प्रदेशसभाको समानुपातिक सिट बाँडफाँट हुँदै, कुन दललाई कति सिट ? – YesKathmandu.com
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनतर्फ समानुपातिकतको सिट बाँडफाँट बिहीबारसम्म गर्ने भएको छ। बिहीबार अबेरसम्म भए पनि सिट बाँडफाँट सक्ने आयोगको तयारी छ। बिहीबार समय अभावमा सिट बाँडफाँट नभएमा शुक्रबार बाँडफाँट हुनेछ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रारम्भिक रुपमा प्राप्त भएको तथ्याङ्क प्रशोधन भइरहेको बताए। ढकालले तथ्याङ्क पुनः परीक्षण सकेर आजै सिट बाँडफाँटको तयारी रहेको पनि बताए।उनले भने ‘तथ्याङ्क प्रशोधनको काम भइरहेको छ। आज रातिसम्म प्रदेशतर्फको सिट बाँडफाँट हुन्छ।’
कसको कति सिट?
प्रदेश नं १मा लाख ७३ हजार ७०९ मत पाएको नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी १५ सिट पाउने देखिन्छ।यस्तै कांग्रेसले १३, माओवादी केन्द्रले ५, संघीय समाजवादी फोरमले २, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि एक सिट पाउनेछ।यस्तै, प्रदेश २ को समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी कांग्रेसले ११ सिट पाउनेछ। राजपाले १०, संघीय समाजवादी फोरमले ९, एमालेले ७, माओवादी केन्द्रले ५ र नेपाल संघीय सजाजवादी पार्टीले १ सिट पाउनेछ।
प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी सिट एमालेले पाउनेछ। एमालेले प्रदेश ३ मा १६ सिट पाउनेछ। यस्तै, कांग्रेसले १४, माओवादी केन्द्रले ८, विवेकशील साझाले ३, राप्रपाले १, राप्रपा प्रजातान्त्रिक १, र नेमकिपाले १ सिट पाउनेछन्।यस्तै, प्रदेश २ को समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी कांग्रेसले ११ सिट पाउनेछ। राजपाले १०, संघीय समाजवादी फोरमले ९, एमालेले ७, माओवादी केन्द्रले ५ र नेपाल संघीय सजाजवादी पार्टीले १ सिट पाउनेछ।
प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी सिट एमालेले पाउनेछ। एमालेले प्रदेश ३ मा १६ सिट पाउनेछ। यस्तै, कांग्रेसले १४, माओवादी केन्द्रले ८, विवेकशील साझाले ३, राप्रपाले १, राप्रपा प्रजातान्त्रिक १, र नेमकिपाले १ सिट पाउनेछन्। प्रदेश ४ मा पनि एमालेले नै सबैभन्दा बढी सिट पाउनेछ। प्रदेश ४ मा एमालेले १० सिट, कांग्रेस ९, माअोवादी केन्द्र ३, नयाँ शक्तिले १ सिट पाउने सम्भावना छ।
यस्तै, प्रदेश ५ मा एमालेले १३, कांग्रेसले १२, माओवादी केन्द्रले ६, र संघीय समाजवादी फोरमले २ सिट पाउने देखिन्छ।यस्तै, प्रदेश ६ मा एमाले ६, कांग्रेसले ५ र माओवादी केन्द्रले ४ सिट पाउनेछन्। प्रदेश ७ मा कांग्रेसले ८, एमालेले ८, माओवादी केन्द्रले ४ र रापजाले एक सिट पाउने मतपरिणामले देखाउँछ।
रानीपोखरी आसपासको कफीसप हटाउन विद्यासुन्दरलाई रन्जुको आग्रह
३२ जिल्लामा मङ्सिर १० गते र ४५ जिल्लामा २१ गते दुवै तहको निर्वाचन हुने
‘तीनवटै निकायको निर्वाचन गर्न समय छ,हतार नगरौ’
जनजीविकाको कार्यक्रमले एमालेप्रति जनताको भरोसा बढेको पोखरेलको दावी
तीन दिन पछि भारतीय दुतावासले गर्यो यस्तो खण्डनः हामीले डिनर खुवाएका छैनौं
सरकारले फेरी बढायो इन्धनको मूल्य
प्रचण्डको तनाव हरण गर्न २० घण्टासम्म साथ दिने को हुन महेन्द्र ?
राष्ट्रिय सभामा तीन कांग्रेस नेताको एकलौटी सिफारिस, ओली र दाहाललाई देउवाको चुनौति
प्रचण्डको सचिवालयबाट कसरी हरायो सुशिल ज्ञवाली वर्खास्तको निर्णय ?
मिस नेपाल नीकिता चन्दनको गोप्य डायरी : …त्यसपछि चुपचाप डायरीमा ५० प्रतिसत रकम लेखेँ
राहतका लागि खाद्यान्न वितरण सुरु
देउवाको वंगला अगाडि नै जमायो एमालेले कब्जा,२९ स्थानमा विजयी,४० स्थानमा अगाडि
गौरी मल्ललाई अनोज शाक्यको आरोप ‘क्यामेरा चोर्नेकै ठूलो कुरा ?’
फाटेकै हो त अजयराज सुमार्गीसँग प्रचण्डको ‘मन ?’
कप्तान पारस खड्काले सतक बनाए तर उपाधी यूएईले जित्यो